mairie-antananarivo – JICA – Kaominina
JICA – Kaominina
auteur 26 janoary 2017 Commentaires fermés
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny Carlton Madagascar ny momba ny Tetik’asa goavana antsoina hoe : Tatom iarahana amin’ny Fanjakana Japonais amin’ny alalan’ny JICA izay miteraka Fampandrosoana amin’ny lafiny maro. Ao anatin’ny 2 taona no hanaovana ny Drafitra Fototra momba ny Lamina hampandrosoana ny Tanàna amin’ity Tetik’asa ity na ilay antsoina hoe : Plan d’Hurbanisme Directeur.
Tsara anefa ny manamarika fa efa nisy ny Drafitra Fototra tamin’ny taona 2004 izay azo iaingana tsara amin’ity Tetik’asa ity. Tsikaritra fa ialan’ny Fanjakana foibe io Drafitra tamin’ny taona 2004 io ka ny Drafitra vaovao izay ho atao dia midika fanilihana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra kanefa misy tany ato anatin’ny Faritry ny CUA no ampidirina ao anatin’ny Tetik’asa ka amin’izay fotoana izay dia ny Fanjakana no hifehy fa ny Kaominina Antananarivo Renivohitra kosa dia ho mpitazana fotsiny ihany izay lasa tompony mangatakatiny.
Midika izany fa misy ny finiavan’ny Fitondram-panjakana hanaisotra tsikelikely ny fahefana eo ampelatanan’ny Kaominina. Volabe mantsy no mitontona amin’ity Tetik’asa ity izay mahatratra 3,5 Tapitrisa Dolara. Manana ny toerany manokana Antananarivo amin’ny maha Renivohitra azy ka izay no tsy tokony hanamaivanana azy amin’ny Tetik’asa toy itony.